Momba anay - Foshan Gaoming Zhengxing Mechan-Elecronic Co., Ltd.
FOSHAN GAOMING ZHENGXING MECHAN-Elektronika CO., LTD (ZXM GLASS MACHINERY COMPANY LIMITED) dia orinasa hi-tech manokana amin'ny famolavolana, famolavolana ary fanamboarana milina fanodinana vera. Niorina tamin'ny taona 2001 izy, ary manana traikefa 19 taona amin'ny fikarohana teknolojia sy fikolokoloana milina fitaratra. Ny orinasan-tsaintsika dia any Gaoming, Foshan, Guangdong, Sina, akaiky kokoa an'i Guangzhou. Manana trano fanatobiana entana any Chencun, Foshan ary showroon machine edger roa ao Lunjiao, Foshan izahay. Tongasoa eto hitsidika anay dia ho talanjona ianao.
ZXM dia manamboatra milina fanodinana fitaratra isan-karazany ao anatin'izany ny masinina fanodinana vera, milina fitaratra fitaratra, milina fitaratra fitaratra, milina fanodinana vera, milina fitotoana vera, milina fandavahana vera, milina fanodinkodinana / fametahana vera, dehydrator maloto fitaratra, sns. Ny mpanjifa dia afaka misafidy safidy malefaka amin'ny maody manual na milina maody mandeha ho azy, rafitra mpampitohy rojo na milina fitaterana rafitra fitaterana baolina hahatratra ny fepetra takiana. Izahay koa dia manome milina fanasan-damba fitaratra sy milina fitobiana fitaratra arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny serivisy aorinan'ny varotra ZXM dia mifototra amin'ny fifandraisana tsara sy ara-potoana amin'ny mpanjifa. Hampahafantarina ny mpanjifa ny vaovao nohavaozina momba ny hafainganam-pamokarana, ny satan'ny fandefasana ary ny vaovao momba ny fandefasana antontan-taratasy, sns. .
Miaraka amin'ny kalitao marin-toerana, ny vidin'ny fifaninanana, ary ny serasera ara-barotra tsara, mahazo laza avo izahay na amin'ny tsena anatiny sy ivelany. Ny tsenan'ny orinasa ZXM dia mandrakotra firenena maherin'ny 40 ary ankehitriny dia mitombo hatrany. Tongasoa eto hiaraka aminay hahatratra ny fiaraha-miasa mandresy!
• ZXM dia mitazona tany mirefy 30000 metatra toradroa.
• ZXM isan'ny mpiasa mihoatra ny 200.
• Mahatratra 1000 ny isan-taona ny fahaizan'ny famokarana ZXM.
• Ireo mpizara sy ivon-toeran-draharaha ZXM dia mandrakotra firenena 40 mahery.
• ZXM dia manome serivisy namboarina.
• ZXM 19 taona za-draharaha matihanina sy manankarena ary fanampiana ho an'ny mpanjifa manerantany.